Home » WARARKA MAANTA » Xog faah-faahsan oo ku saabsan heshiiska Dhismaha ciidamada ee dowladda federaalka iyo maamulgobaleedyada	Xog faah-faahsan oo ku saabsan heshiiska Dhismaha ciidamada ee dowladda federaalka iyo maamulgobaleedyada
19/04/2017	401 Views Dowladda Federaalka ah ee soomaaliya iyo dowlad-goboleedyada xubnaha ka ah ayaa isla meel dhigay qaab-dhismeedka Ciidanka Xoogga dalka soomaaliya iyo kan Booliska.
Shir ay Hoggaamiyeyaasha Dowladda dhexe iyo kuwa goboladu ku yeesheen magaalada Muqdisho intii u dhaxeysay 15- kiii laa iyo 16 kii bishan April ayey isla garteen in tirada Ciidanka Xoogga dalku noqdo 18,000 kun oo isugu jira Dhulka, Badda iyo Cirka laguna daray 4000 kun oo ah Ciidanka Danab ee sida gaar ah u tabaran, kuwaasoo tirada guud noqonaya 22 kun oo Askari.
Ciidanka oo hoos imanaaya Wasaaradda Gaashaan-dhigga ee Dowladda Federaalka, ayaa waajibkiisu yahay: ilaalinta Madax-bannaanida dhuleed ee dalka, difaacidda Qataraha Dibadda iyo Gudaha, waxaana loo qeybin doonaa Qeybaha kala ah: 12-aad, 21-aad, 43-aad, 48-aad, 49-aad, 54-aad, 26-aad iyo 60-aad, kuwaasoo ah Talisyo qeybeedyo uu horey u lahaan jiray Ciidanka Xoogga dalku. Waxaana talis qeybeed kasta laga abaabulayaa 500 oo ah Ciidanka gaarka ah ee Danab. Wasaaradda Gaashaan-dhigga ayaa laga rabaa inay diyaariso Miisaaniyadda ciidanka iyada oo la kaashaaneysa Wasaaradda Maaliyadda, waxaana Ciidanka Taliye guud u ah Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo iska leh Amar-siinta iyo la socodkoodaba. Ciidanka ayaa lagu tababarayaa gudaha Dalka si ay u yeeshaan Manhaj mideysan oo soomaaliyeed. Ciidamada hadda hoos taga Dowlad goboleedyada ayaa laga soo xulayaa iyadoo inta soo hartana laga dhigayo Boolis ama Daraawish, waana in Ciidamadan lagu diyaariyaa muddo lix bilood gudahood ah oo ka billaabaneysa 1-da Juun ee sanadkan 2017-da. Dowladda Federaalka ayaa laga rabaa Mushaarka iyo Taakulada Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Waxaa kale oo ay Madaxda Soomaalidu isla meel-dhigeen dhismaha Ciidan Boolis ah oo dhan 32 kun oo askari kuwaasoo loo kala qeybin doono Heer Federaal iyo mid maamul-goboleed. Ciidanka Booliska oo aan la sheegin tirada heer Federaal ka mid noqoneysa ayaa qeybta kusoo aadda Dowladda dhexe ay iyadu Mushaarkooda iyo qalabkooda bixin doontaa, halka inta kalena ay Dowlad-goboleedyadu qeybta kusoo aadda bixin doonaan dhaqaalihiisa, waana in howshan lagu dhameystiraa muddo saddex bilood gudahood ah oo ka billaabaneysa 1-da juun ee sanadkan 2017-ka iyadoo ciidanka aan soo buuxin shuruudaha ka mid noqoshada loo sameyn doono barnaamijyo wacyi gelin iyo dhaqan celin isugu jira si ay bulshada uga mid noqdaan.
Waxaa kale oo la dhisayaa Guddiga Ammaanka Qaranka oo ka kooban: Madaxweynaha, Ra’iisul wasaaraha, Wasiirrada Amniga gudaha, Arrimaha dibedda, Gaashaan-dhigga, Caddaaladda, Maaliyadda iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, iyadoo Madaxda Ciidamada, Agaasimeyaasha Ciidamada xoogga dalka iyo Lataliyeyaasha ammaanka Qaranku ay shirka uga qeybgali doonaan qaab farsamo.
Ugu dambeytii howshan ayaa la rabaa in lagu qabto Muddo 12 bilood ah, lamana oga sida ay ku qabsoomi karto, marka la fiiriyo culeysyada faraha badan ee dhankasta ka heysta Dowladda uu madaxda ka yahay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahu Farmaajo.
Intaas ayaana idinkugu soo koobanay qeybaha ugu muhiimsan ee ku qoran Qoraalka laga soo saaray Shirkii Dowladda dhexe iyo kuwa goboladu ku yeesheen magaalada muqdisho 15 ilaa iyo 16 kii bishan.
Previous: Amina Muuse iyo barnaamijka kumaa tahay? dhibaato weyn oo Soomaaliya ku soo wajahan (Dood Xiisa leh iyo aqoonyahanno caan ah)
Next: Dadkii ugu badnaa ee Soomaali ah oo Mareykanka laga soo celinayo.